I-NextMapping | Ubufakazi be-NextMapping ™
Sithole impendulo enhle ngokwedlulele evela kubahlanganyeli ochungechungeni lokuhlangenwe nakho kwabo, nakhu abakushoyo ngeseshini yakho:
"Ngivuselela indlela engisisebenzisa ngayo isikhathi sami."
“Umthelela wobuholi. Wonke umuntu ungumholi ngokuzayo emsebenzini kungakhathalekile ukuthi ungubani. ”
"Ukucabanga okubucayi nesici sokuthi kungani umuntu engenza okuthile ngaleyo ndlela."
"Amakhono abesifazane ayadingeka esikhathini esizayo emsebenzini."
Wenze umthelela omkhulu!
Nayi impendulo evela eqenjini lami:
Inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl yayisuka enhliziyweni, waxoxa obala izindaba zomuntu siqu ezazithinta abahlanganyeli bethu. Sakwazisa ukuxhumana kwakhe phakathi komsebenzi nempilo yangempela; ukuthi kwenzekani empilweni yakho kuyingxenye yokuthi sizibandakanya kanjani emsebenzini. Ngobuchwepheshe udonsa imiyalezo kanye nocwaningo lwakhe olunzulu esekela amaphuzu akhe abalulekile. Ithuluzi lezincwadi likaCheryl liyisetshenziswa esihle kakhulu sobuholi bokuzilungiselela ukulungiselela inguqulo yethu yekusasa lomsebenzi.
Ukuhlanganisa isikrini esiluhlaza nokukhiqizwa kochwepheshe kwenza le nkulumo eyisiqalo icishe ifane nokuthi ayikhulume mathupha!
Siyabonga futhi ngokungeza inani elingakholeki ochungechungeni lwethu! Ngizoqhubeka nokulandela inqubekelaphambili yakho njengoba uqhubeka nokunikeza ukuqonda okukhulu ngekusasa lomsebenzi.
C. Schroeder - Umqondisi, i-CME
Ukubuyekezwa kwabahambele umhlangano we-Virtual Keynote kaCheryl ovela kumcimbi wokuthuthukiswa kobuholi begesi i-Enbridge:
“Ngibonga ithimba ngokuhlela lo mcimbi. Isipikha besibambe iqhaza kakhulu futhi sihlinzeka ngamathiphu amahle kakhulu asebenzayo. ”
"Ngithole isikhulumi sinomfutho futhi sinikeze iziphakamiso ezifanele enkampanini yethu."
"UCheryl bekufanele abhukhwe isikhathi eside!"
"UCheryl inkulumo yakho eyisihluthulelo ibiyingxenye esemqoka yengqungquthela yethu - siyabonga ngokunakekela kwakho, ukwenza ngezifiso nangombhalo oshukumisayo okhuthazayo."
Umhleli Wemicimbi - IsevisiNow
Ukubuyekezwa kwesikhashana kweCheryl's Virtual Keynote kusuka ku-EBAA 2020 Online Contendees:
"Lokhu bekuyisethulo esihle kakhulu futhi nesikhathi besingangabi ngcono ngalezi zinselelo esibhekene nazo sonke manje."
“Ngithande isoftware isikhulumi sosuku esisetshenzisile - mhlawumbe isipiliyoni esingcono kakhulu engisibonile okwamanje (futhi esiseduzane nesipiliyoni somuntu). Ukubekwa kabusha kwesithombe sakhe njengokufanelekile kulokho okwakuku-slide sakhe. ”
"Ngikuthandile ukusebenzisa kukaCheryl ipulatifomu okwenze kwaba lula ukulandela isethulo sakhe futhi ngaphula isizungu."
"Iphuzu likaCheryl ngokufuna ukuqonda nokuthola esivumelana ngalo nezingqinamba ezisiphonsayo, kunokuba sibuyele emuva sizame ukulwa nalezo zinto, belibaluleke kakhulu futhi lifike ngesikhathi embonini yethu."
“Iseshini noCheryl ibinamandla futhi ishukumisa. Imiqondo yobuholi obusha nobuhlakani kuzosiza izinhlangano, uma zingasebenzisi lezi zinhlobo, ziphumelele ngokwengeziwe ekwakheni iqembu. ”
"Ngizizwa nginomdlandla futhi ngigxile kakhulu esikhathini esizayo kunokuba senginaso okwesikhashana!"
"Imibono emihle yobuholi."
"Isethulo sikaCheryl besithakazelisa impela, futhi ngifunde amathiphu engingawasebenzisa emsebenzini."
"Isikhulumi esihle kakhulu esifike ngesikhathi - Ngizizwe ngixhumene nomphakathi ngemuva kwalesi sikhathi."
“Ngiyabonga, Cheryl, ngokukhombisa / ukukhombisa umbono wakho - isethulo esihle!”
“Bengicabanga ukuthi i-NextMapping ihle kakhulu futhi ifike ngesikhathi. ”
"Isikhathi esifanele salesi sihloko!"
“Ngayithanda indlela ayeyinhloko ekhuluma ngayo ezansi kwezilayidi zakhe. Isizinda sakhe asisusanga ekubonisweni kwama-slide ngenxa yalokho. ”
"UCheryl ubemuhle kakhulu!"
“Ngikuthande lokhu. Ukugcizelela uzwela kuyadingeka. ”
"Ukuvota okuxoxisanayo kube yisengezo esihle esethulweni."
"Isikhulumi esiyinhloko besinolwazi kakhulu futhi singancoma ikusasa."
“Kwakujabulisa lokho! Uhlelo lwakho olubonakalayo lwalusebenzisana futhi luzibandakanya futhi lwenza izilaleli zathandeka kulo lonke. Besikhona. ”
Usihlalo Wenkomfa - i-EBAA
Umqondisi - NWLS
“Kuhle. Ngiyabonga! Futhi ngiyabonga futhi ngesethulo esihle, i-podcast ne-spark session. Ngithole amathani empendulo enhle kukho konke. Ngiyabona futhi!"
H. Wetzel, Umqondisi Wezokumaketha We-Sr. Nezokuxhumana Kwamalungu - NRECA
Ukubuyekezwa okuvela ku-BMO Ikusasa Labantu Abafika Emhlanganweni:
"Isikhathi esihle sokufunda nokucabanga namuhla ekuseni ngekusasa lomsebenzi - Ngiyabonga."
“UCheryl ujabule kakhulu ukuthi sikwazi ukukuletha kumakhasimende ethu kulo lonke elaseCanada, ucwaningo lwakho olubheke phambili kanye nokuqonda kulapho umhlaba ubheke khona! Hhayi lokho kuphela, kepha ukujabulela ukusebenza noqobo. Kube yintokozo enkulu. ”
“AbakwaBMO babambe ingqungquthela“ Yesikhathi Sokusebenza - Indlela Yokuba ngumholi Okulungele Ukuzayo ”kuleli sonto nguCheryl Cran. Emhlabeni we-automation kanye ne-digitization, kubalulekile ukuqonda ukuthi inqubekela phambili nobuchwepheshe ithuthukisa amathuba okuphumelela, futhi ukuba namaqembu amahle kakhulu akwazi ukuzivumelanisa nezimo futhi angazamukela ushintsho kuzoletha imivuzo, hhayi ukunciphisa imisebenzi. Imayelana nokunikeza amandla amaqembu ukuthi asebenze kahle futhi agxile kuzidingo zebhizinisi eziyinhloko. Ikhasimende like langitshela ukuthi lifuna ukwenza amabhange amancane nokwenza ibhizinisi elithe xaxa - lokho kuyisinyathelo sokuba ngomsebenzi olungele ukusebenza ngokuzayo. ”
“Ngiyabonga, Cheryl, ngomhlangano wokufundisana obucabangisisa kahle. Ucasule ukubonakaliswa kwekhwalithi eningi kumakhasimende ethu nakubasebenzi bethu abakhona namuhla. Futhi, ngiyabonga ngebha eseceleni ethokozisayo: ubudlelwano phakathi kokuzenzakalela ne-UBI —ingxoxo enkulu! ”
“I-workshop enhle ngezinhlangano ezilungele ukusebenza esikhathini esizayo kanye nabaholi abalungele ikusasa! Ngokubambisana, ake sishintshe ukucabanga “kwami” kube ukucabanga “thina”! Ngibonga kakhulu ngolwazi owabelane ngalo ngesikhathi somhlangano. Sengijahe ukufunda izincwadi zakho! ”
“Ukusa okukhuthazayo nokubandakanyayo namakhasimende ethu eBMO Financial Group eCanada Commercial Banking kanye noCheryl Cran. Ubuchwepheshe emsebenzini kumele busetshenziselwe ukulungiselela ikusasa kugxilwe ekutheni ubuchwepheshe bungayithuthukisa kanjani imiphumela yabantu. Kube yisipiliyoni sokuvula iso ukufunda ukuthi ungasithatha kanjani isinyathelo ngokushesha ukwandisa ukuthengwa kwethimba, ukuzivumelanisa nezimo nokwenza kahle. ”
"UCheryl inkulumo yakho eyisihluthulelo ethi," Shintsha Ubuholi nekusasa Lomsebenzi, "belifanele iqembu lethu labaholi nakubo bonke esibambisene nabo emhlabeni.
Ithimba lethu likujabulele ukuba nawe ehhovisi lekhanda laseLas Vegas futhi saba nemibiko eminingi emihle evela kuwo wonke umuntu osendaweni nakubasakazi ababukhoma.
Sibone ingxoxo eningi ye-Twitter mayelana namanye amasu akho kuguquko lobuholi kanye nekusasa elifana ne-'hippship 'kanye nokudiliza ama-silos.
Sonke sifisa ukuthi sibe nesikhathi esithe xaxa nani!
Masihlale sixhumana ngokubambisana okuzayo - siyabonga futhi. ”
Umphathi Omkhulu Wezwe, Ikhwalithi - I-Aristocrat Technologies
Ukubuyekezwa kukaRave 'text' okuvela kwabahambele ingqungquthela ye-ASQ:
"Lesi yisethulo esihle kunazo zonke, nesiphucuzekile kunayo yonke ingqungquthela."
“Le yindlela enhle yokukhuthaza ukubamba iqhaza nokusiza abantu ukuthi bafune ukukulalela ngempela. Siyabonga ngokwabelana ngale ndlela entsha nokuqukethwe okuhle kakhulu. ”
“Ngikhathazwa amandla akho aphezulu kanye nethemba lakho. Ngiyathanda ukuxhumana futhi ngithole izeluleko zakho. ”
"Kuyamangalisa, kuyakhumbuleka, kuyondla, kucabangele - NGIYABONGA"
"Ngiyabonga! Ngizo. Isethulo esihle namuhla. Uyinyakazisile !! Ngizoyifunda ngijabule incwadi yakho. ”
“Ngiyakwazisa kakhulu ukuzimisela kwakho ukwabelana ngesethulo sakho nezinye izinsiza. Kubonisa ukuzethemba kwakho futhi awukhathazekile ngokwakha ibhizinisi lokubonisana nje. ”
“Ngcwele! @ $ & Isethulo esivelele! Ngiyabonga."
“THANDA ukuxhumana nokuqukethwe okuqabulayo”
“Oh abesifazane Abakhulu - Siyabonga ngokugcizelela kwakho ku“ ushintsho ngumthetho wempilo ”
“Kuhle! Uphinde wakhuluma kakhulu ngalokhu ngesikhathi sesethulo sakho. Siyabonga kakhulu ngokusishaya namhlanje. Sengiguquliwe. ”
"Ngiyabonga, unamandla amakhulu futhi uyakhuthaza."
“Isikhathi esihle sokuxoxisana. Siyabonga ngokukhuthaza nokusebenza! Kuhle. ”
“Ngiyithandile. Impela ukugqama kwengqungquthela. Ngiyabonga!"
“Inkulumo enkulu yosuku !!! Nginengqondo! Ibhalansi enkulu yamahlaya, ukuhlakanipha, ukuzibandakanya nokukhuthazeka njengokujwayelekile. Kuhle kakhulu kuze kube manje! ”
“Isethulo esimangazayo isimo sakho sengqondo esizayo esizayo siyathathelana. Siyabonga ngokusikhuthaza. ”
“Isikhathi esihle kakhulu kuze kube manje! Unamandla futhi uyakhuthaza ”
“UCheryl ubeyisikhulumi sethu sokuqala sokuvula ingqungquthela yethu ye-Innovation Unplugged Skills Summit eToronto.
Kusukela engxoxweni yethu yokuqala bekusobala ukuthi uCheryl wayenolwazi kakhulu ngekusasa lomsebenzi futhi wazinika isikhathi sokuqonda izinhloso zenhlangano yethu nomcimbi wethu. Isethulo sakhe besibandakanya futhi sifundisa futhi sihlela lonke usuku lwethu ngokuphelele. Sibe nezithameli ezahlukahlukene ezibandakanya abafundi bezikole zamabanga aphakeme, othisha, ochwepheshe bezimboni kanye nezikhulu zikahulumeni. Wonke umuntu uthathe okuthile enkulumweni kaCheryl futhi waphawula ngamandla esethulo kumazwana abo okuphendula. Ngingakujabulela ukusebenza noCheryl futhi ngokuzayo. ”
Namir Anani - UMongameli we-ICTC kanye no-CEO
“Ngiyithokozele kakhulu inkulumo yakho yosuku. Ngathatheka ngaso leso sikhathi futhi ngakuthanda ukuxhumana. Ngaphezu kwakho konke, uthando lwakho ngekusasa emsebenzini nakwezebhizinisi lwenze isethulo sakho sangalibaleka nakakhulu. Ngicela ungazise ngemicimbi yesikhathi esizayo namaphrojekthi lapho ubambe iqhaza khona. Ngingathanda ukuzwa ukhuluma kabanzi ngezinto ezintsha nobuchwepheshe.
Kwakujabulisa ngempela ukukuzwa ukhuluma. Ngiyethemba sizohlangana, kungekudala. ”
Isimenywa seBanga le-9 - Ingqungquthela Yezobuchwepheshe ye-ICTC
“UCheryl ubeyisikhulumi sethu sokuqala sokuvula i-AGA National Leadership Training yaminyaka yonke futhi ubemangele!
Inkulumo yakhe eyisihluthulelo ibinesihloko esithi, "Ubuciko Bokushintsha Ubuholi - Indlela Yokuguquguquka kuFlux" futhi umyalezo wakhe ubufike ngesikhathi esifanele futhi ubaluleke kakhulu kubahlanganyeli bethu. Sithole impendulo enhle evela eqenjini lethu mayelana nesitayela sikaCheryl sokulethwa okunamandla, ukuvota nokuxhumana kwe-Q & A, nocwaningo aluthumele kubahlanganyeli ukuze bazi izilaleli zakhe futhi enze ngezifiso isethulo sakhe. Inkulumo eyisihluthulelo yokuvula kukaCheryl iqale ingqungquthela yethu ngomfutho omkhulu - sawathanda amavidiyo nomculo owenza wonke umuntu wajabula usuku lonke. ”
J. Bruce Umqondisi Wezemihlangano
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu sosuku emcimbini wethu wobuholi waminyaka yonke kanti ngegama nje ubephuma phambili. Umbono oyingqayizivele kaCheryl ngekusasa lomsebenzi nokuthi yini edingekayo ukuze izinkampani zibe sezingeni eliphambili kwaletha inani elikhulu eqenjini lethu. Uchithe isikhathi ebonisana nami nethimba lobuholi ngamasiko ethu ahlukile nokuthi angakusebenzisa kanjani lokho ebesivele sikwenza kahle. Abaholi bethu banikeze izithupha ezimbili ngesitayela sokulethwa kukaCheryl esashesha, siqondile futhi sinamandla. Ngaphezu kwalokho, abaholi bakujabulele kakhulu ukuthi uCheryl wasijoyina ukuze sijabule kusihlwa. Engikuthole kubaluleke kakhulu njenge-CEO yenkampani wucwaningo ngaphambi komcimbi alufaka enkulumweni yakhe esemqoka kanye nesikhathi sangempela sokuvota nokuthumela imiyalezo okubandakanya iqembu lethu labaholi eliqondayo. UCheryl akagcinanga ngokukhuluma ngekusasa nemikhuba asinike yona amathuluzi wobuholi bezinguquko ukudala izinga lethu elilandelayo lempumelelo. ”
"Angikwazi ukubonga uCheryl ngokwanele ngenkulumo yakhe ekhuthazayo futhi efundisayo mayelana nokuheha abenzi bezinguquko kuNgqungquthela Yomkhakha Womphakathi wase-JLT Canada ka-2018. Iseshini yakhe yazwakala kahle kubalaleli bethu bakamasipala, kodwa njengenhloso yeminyaka eyinkulungwane yokuba ngoshintsho ngosuku oluthile, Isikhathi sikaCheryl sifike kahle kimi. Futhi izihambeli zethu bezingayeki ukukhuluma ngezinto ezibandakanyekayo kwisethulo sakhe - zisebenze kahle kakhulu njengendlela yokuhlanganisa wonke umuntu, ngokoqobo! ”
P. Yung Ukukhangisa nezokuxhumana, uJardine Lloyd Thompson Canada Inc.
“UCheryl ubeyisikhulumi sethu esivala ingqungquthela yengqungquthela yethu yaminyaka yonke ye-TLMI. Wayehlonishwa kakhulu neqembu lethu - inkulumo yakhe eyisihluthulelo inikeze ukuqonda nocwaningo ngekusasa lomsebenzi kwakuhambisana naleli qembu elenza kahle. Sithandile ukuthi uCheryl ukungeze kanjani ukuthintwa okukhethekile njengemifanekiso yomcimbi wethu wokungenisa izihambi kusihlwa sangaphambilini futhi wakhomba elinye lamalungu ethu ngempumelelo ngenkathi enikeza nokuqonda okuhlelekile. Ukuxhumana kokuthumela imiyalezo nokuvota bekuhlukile futhi kungeze izinga elengeziwe lokufakwa kahle kwezethameli. Besikuthanda ukusebenzisana noCheryl futhi neqembu lethu belimthanda. ”
D.Muenzer UMongameli, i-TLMI
"UCheryl Cran ubesisikhulumi sethu sokuqala sokuvula engqungqutheleni ye-2018 CSU Equipment Management Conference futhi wayevelele! Umyalezo wakhe oshintshweni, isibindi kanye nokusebenzisana yikhona kanye iqembu lethu elalikudinga ukuzwa. Ikusasa akumele ngokwesatshwe lapho umuntu eqaphela ukuthi ungumqambi. Wabelana ngamathuluzi asisebenzisayo sonke esingabuya nawo futhi siwasebenzise ngokushesha ukuze siphumelele iqembu leqembu. Ukusetshenziswa kukaCheryl ukuthumela imiyalezo ngezethameli nokuvota kwamukelwa kakhulu futhi neqembu lethu lazibandakanya naye ngokuzikhandla lisebenzisa lawa mathuluzi. Ngayithanda indlela uCheryl aphendula ngayo ngokuzithandela YONKE imibuzo yombhalo kubandakanya naleyo inselele. Imibuzo ebhalelana imiyalezo ikhuthaze ukuvezwa esidlangalaleni kokukhathazeka okusuka enhliziyweni. Iningi lababekhona libike ngombhalo nange-Twitter ukuthi ukuvela kukaCheryl okunamandla okugcizelela isithangami sengqungquthela yezinsuku ezimbili ephumelele kakhulu. "
I-N.Freelander-Paice Umqondisi Wezinhlelo Zenkulisa, I-California State University, Ihhovisi LikaChancellor
“UCheryl Cran wuhlelo lwangempela 'lwangempela'
Asikho isikhulumi esisebenza kangcono, isazi se-psychology, futhi sishintshe umeluleki wobuholi ukwedlula uCheryl Cran. UCheryl uthembekile ngokuphelele, uqotho, uyabonakala, futhi uyathandeka njengoba elandisa okuhlangenwe nakho kwakhe kwempilo nezimo zanamuhla zebhizinisi nomsebenzi.
Anginakho ukwenqaba kokumncoma kunoma iyiphi inkampani yeFortune 100 ebhekene noshintsho olukhulu ekusebenzeni kwabo.
Umhlaba ubuyoba yindawo engcono kakhulu ukube bebelandela izeluleko nezincomo zikaCheryl ngethemba lokuxhumana nabanye nokuthi bangabhekana kanjani nakho. ”
C. Lee UMongameli, Inhlangano Yezisebenzi iRaytheon
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu sosuku emhlanganweni wethu wobuholi futhi isihloko sakhe esithi: Framing Our Future - Leading the Change To Get Bekukhona umyalezo wakhe futhi ukulethwa kwakhe bekufanele iqembu lethu.
Ucwaningo lukaCheryl ngekusasa lomsebenzi kanye nezinguquko abaholi okudingeka bazenze ukuze bafike lapho zazifike ngesikhathi futhi zilungele iqembu lethu. Ukucwaninga kwakhe kanye nokulethwa okunamandla kudale inani elihle kakhulu leqembu lethu lokuqonda labaholi. Iqembu lethu lihlanganyele futhi mathupha ekubhalweni kwemibuzo nasekuvoteni okufakwe nguCheryl emazwini akhe aphambili. Ukugqugquzelwa kanye nemibono engasebenza kwakungamandla nje ambalwa okubhalwa kwencazelo ebalulekile kaCheryl.
Umcimbi wethu wobuholi ube yimpumelelo enkulu futhi sifaka inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl njengengqophamlando yempumelelo isiyonke. ”
B. Murao Iphini Likamhloli, BC Ukuhlolwa
"UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu sosuku engqungqutheleni yethu yobuholi futhi inkulumo yakhe eyisihloko sithi:" Ubuciko Bokushintsha Ubuholi - Kwenze Kwenze Kubaluleke "ibe yimpumelelo enkulu neqembu lethu lobuholi besitolo.
KwaRubicon siyakhula futhi sibhekana nezinguquko eziningi eziqhutshwa ngaphakathi kanye noshintsho olwenziwe ngaphandle. Ucwaningo lukaCheryl kanye nokwenza ngokwezifiso kweqembu lethu kube nomthelela nathi.
Sithokozisile ukuthumelelana imiyalezo, ukuvota nokuxhumana kanye nokuqukethwe okusebenzisekayo, imibono ezisebenzisekayo bese silandela izimpendulo zemibuzo yama-group amaqembu.
UCheryl wazifeza izinhloso zethu futhi wasiza iqembu lethu labaholi bezitolo ukuthi licabange ngezindlela ezintsha neziphezulu ngoshintsho, ukuhlanganiswa kwebhizinisi nempumelelo yangomuso. ”
R. Ukunakekelwa COO, Rubicon Pharmacies
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu sosuku engqungqutheleni yethu yakamuva ye-MISA BC yongoti bezobuchwepheshe be-IT - inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl ibithinta iqembu lethu!
Ngazise izinto eziningi ngenkulumo eyisihluthulelo kaCheryl - bekukhona ibhalansi ephelele yokuqukethwe, ucwaningo nemibono kanye nogqozi.
Impendulo evela kwababekhona yaba yinhle futhi bathokozela amandla okubhalela uCheryl nezimpendulo zakhe eziqondile kanye nokuvota ukuhlanganisa iqembu.
Ababekhona bashiye inkulumo kaCheryl eyisihluthulelo bezizwa benamandla, baphefumulelwe futhi belungele ukuthatha imibono nezenzo babuyela emsebenzini bese beyibeka khona lapho impumelelo eyengeziwe.
UCheryl weqile kulokho ebesikulindele! ”
C. Crabtree Ikomidi leNgqungquthela, Inhlangano Yezolwazi ZoMasipala ye-BC (MISA-BC)
“Ngincoma kakhulu uCheryl Cran njengekusasa lomsebenzi nezinguquko kwezobuholi ongakusiza uzulazule ekusaseni lakho kulo mhlaba wezinguquko. Ngibe nabaqeqeshi abakhulu impela phakathi neminyaka yami esikoleni. Abaqeqeshi abakhulu bayabonakala uma ubona umphumela eqenjini labantu abasebenza ndawonye njengomzimba ohlangene. Ezemidlalo, umculo, umdanso - konke kunemivuzo nokuqashelwa kwabaqeqeshi abakhulu. Ukuqeqesha engikwenzela abasebenzi bami bekuyizinto ezincane zeligi. Ngangazi ukuthi uma ngifuna ukusebenza kweqembu elisebenzayo ngidinga umqeqeshi osezingeni eliphezulu. UCheryl Cran yilokho eqenjini lobuholi beMyMutual. Saqala ukuhlangana noCheryl Cran ngo-2014 ngenkathi ecelwa ukuba abe yisikhulumi sosuku eMhlanganweni Wethu WamaBroker waminyaka yonke. UCheryl ufike kusenesikhathi, wahlangana nababekhona futhi wanikeza inkulumo esemqoka nge-Leading Change. UCheryl uyisikhulumi sosuku. Indlela yesibili engazi ngayo uCheryl njengoMqeqeshi oPhethe. Ube ngumqeqeshi nomeluleki ekukhuleni kwami ​​njenge-CEO. Futhi manje nguyena mqeqeshi weThimba lethu lobuholi, osiphonsela inselelo futhi osenza siziphendulele. Ithimba Lethu Lobuholi lithatha i- Okulandelayo Ukuqeqeshwa Kobuholi ku-Inthanethi inkambo enikelwe nguCheryl Cran. Izifundo zitholakala online futhi zifaka eyodwa ocingweni lomqeqeshi oyedwa. Siyakwazi ukukusebenzisa esikufundayo ezimweni zangempela ngosizo lomqeqeshi weqembu lethu. Izindlela eziqondile zokufundiswa nokubonisana kukaCheryl zisizile:
Ukucaciswa kwinjongo yethu nombono osisize ukukhulisa inani labasebenzi kanye nekhasimende
Imihlahlandlela yokuba 'nabantu abalungile' eqenjini lokuqhuba ibhizinisi ngokuzayo
Ukugqugquzela nezinsizakusebenza ezithile ukusisiza ukuqasha, ukuqeqesha nokukhulisa amalungu eqembu lethu
Ukugqugquzelwa kwethimba lobuholi ukukhulisa amakhono okusebenza, ukusebenza kwethimba nokuzibophezela ezinhlosweni
Ukusisiza ukukhulisa ukucabanga kwamasu, ukudala isiko lobuholi okwabiwe futhi kwandise ukubandakanyeka kwabasebenzi
Ukukhuphuka kwamandla nenjabulo ngekusasa nokuthi singalakha kanjani njengeqembu ”
V. Fehr - Isikhulu Esiphezulu Okwami Insurance
“Sibuye noCheryl okwesibili ukuzosiza futhi siqhakambise indawo yethu yokubalekela minyaka yonke yezinsuku eziyi-1.5 kubasebenzi bethu bedolobha, abahlali abaqokiwe, osomabhizinisi nabanye ababambe iqhaza edolobheni, futhi kube yimpumelelo enkulu. Ababekhona bebeze ukuthi bekungcono kakhulu kulo nyaka kunangonyaka odlule futhi kubangelwe wukusiza ngobuchule nangobungcweti kukaCheryl, ukuxhumana nababambe iqhaza nokulungiselela kwakhe. UCheryl ukhulume nesikhulumi ngasinye sezivakashi ku-ajenda ngaphambi komcimbi futhi waqinisekisa ukuthi i-ajenda iyahamba ukuze kube nomthelela omkhulu ekubalekeni okuphelele. Ingqikimba yethu ibithi 'NextMapping' ikusasa lomsebenzi kufaka phakathi izinto ezintsha, ubuchwepheshe, ubuholi namasiko. Inkulumo yakhe eyisihluthulelo kulo lonke ukuhlehla ibandakanya ukuvulwa, ukuvalwa kosuku lokuqala kanye nokuvalwa kosuku lwesibili. UCheryl unekhono elihlukile lokuletha indlela efanele nekhuthazayo edala izixazululo ezintsha kanye nezindlela ezisebenzayo zokusebenzisa imibono eyabiwe. Enkulumweni yakhe evulekile, wabeka ithoni ekhuthazayo ngekusasa lomsebenzi kufaka phakathi umthelela wezobuchwepheshe nokuthi abantu badinga ukuzivumelanisa kanjani nokushesha okusheshayo koshintsho. Inkulumo yakhe yokuvala ngosuku lokuqala ibigxile ku-NextMapping ngekusasa lobuholi nokuthi kusho ukuthini esikhathini esizayo somsebenzi wamaqembu nosomabhizinisi. Izikhulumi ku-ajenda zimboze amadolobha ahlakaniphile, amabhizinisi asezingeni lomhlaba, ukuqamba izinto ezintsha, ukucabanga okudala, ukugcinwa kwedijithali okungokomlando, ama-drones nokuningi. Ngosuku lwesi-2 uCheryl waphindaphinda usuku lonke nohhafu wafaka izinto ezisemqoka ezivela kusipikha ngasinye enkulumweni yakhe yokuvala. Ngaso sonke isikhathi lapho sisebenza noCheryl siye sazuza ekwandeni kokuqamba okusha, nasekusebenzisaneni ngaphakathi eqenjini lethu ledolobha. Sibona uCheryl njengengxenye ebalulekile yokugxila kwethu emisha minyaka yonke futhi sibheke phambili ekusebenzeni naye kaninginingi esikhathini esizayo. ”
W. Foeman - UMabhalane Wedolobha Idolobha lama-Coral Gables
"UCheryl wayeyisikhulumi sethu sosuku e-UVA Wise Economic Forum futhi wethula i-" Ikusasa Lomsebenzi Manje - Ingabe Usukulungele? " Impendulo evela kuzithameli zethu ibifaka imibono efana nale: "Umbono omnandi nogqugquzelayo ngekusasa" "Ngithande inhlanganisela yokusebenza kanye ne-push yokusisiza ukuba sibe nobuchule obuningi" "Imibono ephusile yokuthi singasungula kanjani futhi sandise ubuhlakani besikhathi sangempela impumelelo yesikhathi esizayo ”“ Ucwaningo oluhle kakhulu kanye nezibalo ngekusasa lomsebenzi nokubaluleka kwazo kwezemfundo nakwezamabhizinisi ”“ Kukhuthazwe nguCheryl Cran ”Nakanjani sizoba noCheryl emuva azonikeza ukuqonda okwengeziwe ngekusasa lomsebenzi, ukuqamba kanye nokuguqula ubuholi.”
B. Joyce University Virginia eWise
“UCheryl Cran ubedume kakhulu engqungqutheleni yethu ye-ISBN. Okuqukethwe nguCheryl kunikezwe isikhathi esifanelekile eqenjini lethu labaphathi be-C-Level njengoba kubasizile ukuhlela ingqungquthela egcwele imibono yaba isu eliphathekayo lokuqhubekisela phambili inhlangano yabo. Iqembu lethu linokuqonda okukhulu futhi lingagxeka izikhulumi ezingaphandle komkhakha we-salon ne-spa, kepha inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl yayinamandla futhi yayikhona emalini. UCheryl wenze ngokwezifiso inkulumo yakhe eyisihluthulelo yeqembu lethu, Ikusasa Lomsebenzi Manje - Ingabe Isaluni Yakho Silungile? futhi umyalezo wakhe bekungukulingana okuphelele kocwaningo, imibono efanele, ukukhanyisela ukubheka esikhathini esizayo kanye nokulungiselela ukuphazamiseka okuzayo. Ngokungafani namagama ayisihluthulelo amaningi, uCheryl wenza ngokunenzuzo izinto zokuhlwaya, kufaka phakathi ividiyo ibhulogi futhi wanikela nokuhlola ababekhona kanye nokwenza ukubandakanyeka kokuvota bukhoma nokubandakanya impendulo yabo embhalweni wakhe oyisihluthulelo. Siphinde futhi senza uCheryl wenza ingxoxo yobungcweti ekuhehweni kwethalente eliphakeme futhi iqembu lakhe belimi egumbini lokuma kuphela. Ngeke sinqikaze ukumncoma kwabanye. ”
V. Tate Umqondisi Ophethe Inethiwekhi yamabhizinisi e-Salon International
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu sosuku nomgqugquzeli weworkshop engqungqutheleni yethu iCalgary Stampede Leadership Summit. Umbhalo wakhe oyisihluthulelo: Amaqembu Alungele Isikhathi Esizayo - Wenziwa Kanjani Amaqembu Agile, Aguquguqukayo Nalawo Alungele Isikhathi esizayo ayemangalisa futhi ebathinta kakhulu abaholi babantu bethu.
Ngesikhathi sokufundisana, abaholi babantu bethu abaningi babhalela uCheryl ngesikhathi sosuku futhi babencoma kakhulu ngencazelo yakhe ephelele nezimpendulo zakhe zangempela. Abaholi babantu bethu babeneme ngalokhu okuqukethwe futhi bemagange ukusebenzisa abakufundayo ezindimeni zabo. Isikhathi nokunakekelwa kukaCheryl ekulungiseleleni nasekuqinisekiseni ukuthi uhambisana neqembu lethu kwathokozelwa kakhulu kufaka phakathi inhlolovo yakhe yangaphambi kwababekhona, ukuvota okusebenzisanayo ngesikhathi sombiko oyinhloko kanye nomlayezo wombhalo wemibuzo. UCheryl ulingise ukuthi kubukeka kanjani ukusebenzisa ubuchwepheshe ngenkathi ehlanganyela futhi ekhuthaza abantu ukuthi basuke 'kimi baye kithina'.
UCheryl unikeze ukuqonda okuhle kakhulu ngamathrendi esikhathi esizayo athinta ibhizinisi futhi wanikeza imibono yokudala yokuthi singayisebenzisa kanjani impumelelo yethu. Indlela kaCheryl inembile, isuselwa ocwaningweni futhi iyasebenzisana kakhulu obekulungele iqembu lethu labaholi eliqondayo. "
D. Bodnaryk - Umqondisi, Izinsizakalo Zabantu
ICalgary Exhibition neStampede Ltd.
“Ngibe nenjabulo yokubandakanya uCheryl Cran weqembu elikhulu yonke indawo yokusebenzela, ehlanganisa abasebenzi abangamakhulu amaningana. UCheryl wethule Ikusasa Lomsebenzi manje - Ingabe Uwulungele lo mcimbi omude wosuku. Akazange ahambise inkulumo eyisihluthulelo kuphela, kodwa futhi nesethulo sokuvala sosuku ukuphakamisa umqondo / umqondo wokwenza isipiliyoni sababekhona. Silithokozile ikhono lakhe lokufaka zonke izinto zayo yonke imisebenzi yosuku esivandeni sakhe sokuvala - ukukhetha kwakhe okuhlukile nokunembile ngokuhluka kwamasiko eqembu kugqame impela. Labo abebekhona ngalolu suku bachaze ukwethulwa kosuku oluyisisekelo kukaCheryl njengokunika amandla nomfutho. Umuntu oyedwa wabelane ukuthi udale amandla amaningi, kwakulula ukujabula ngokwakwenzeka egumbini. Inkulumo eyisihluthulelo nokuvalwa kukaCheryl bekuyinto esemqoka kumasifundisane wethu wosuku lonke, engeza kakhulu 'empumelelweni. Ngokuqinisekile singacabanga ukusebenza naye futhi ngincoma kakhulu uCheryl Cran njengesikhulumi sezinhlangano ezibhekene noshintsho noma okungenzeka zifuna ukuhlola izihloko zenguquko, inqubo yebhizinisi, noma inkuthazo. Ngiyabonga, Cheryl ngoba unendlela enhle ngamagama. ”
L. Masse Ephakeme Ground
“UCheryl ubeyifanele ngokuphelele Ingqungquthela yethu Yesikhathi Esizayo - sineqembu eliqondisisa kakhulu labaholi bezinyunyana zezikweletu abazishaya isifuba ngokuba phambili futhi UCheryl ubaphonsele inselelo yokuthi bacabange ngokwengeziwe, ukuze belule indlela yabo yokwenza izinto ezintsha kanye ukwakha amasu esikhathi esizayo ngokuya ngamaqiniso ashintsha ngokushesha embonini yezinsizakalo zezezimali. Singancoma kakhulu uCheryl Cran njengekusasa lochwepheshe bomsebenzi nesikhulumi sosuku. ”
J. Kile Futures Summit Isikweletu Sezimali Abaphethe i-MN
“Isethulo sikaCheryl ngekusasa loMsebenzi sinikeze ihora lokuxhumana nelizobamba iqhaza ukuqala umdlalo wethu. Izivakashi zethu zikuthanda kakhulu ukubamba iqhaza kwezilaleli nezenzo ezisuselwa ebufakazini ezingabuyela nazo emaqenjini abo ngokushesha ukuze zisebenze. Uyikhiphe epaki izethameli zethu ezingama-350 HR, abaqasha kanye nabasebenza ekuthuthukiseni amakhono. ”
J. Palm, uMqondisi Ophethe I-TeamKC: Impilo + Ithalente
“Emcimbini wethu wabasebenzi waminyaka yonke, uCheryl wethule inkulumo eyinkuthazo nefundisayo ngekusasa lomsebenzi kanye nomthelela wethu kithi. Ubuye wasebenzisana nathi ukwenza ikheli lakhe ngokwezifiso liqinisekise ukuthi lalinenjongo futhi lisebenza kubasebenzi bethu. Inkulumo kaCheryl yayivusa inkanuko futhi yethulwa ngamandla amahle. ”
I-LN, Umphathi Omkhulu Wempesheni ye-BC
I-WB, Ucwaningo Nentuthuko BASF
CEO I-National Agra Marketing Association
“UCheryl wasisebenzela ekubalekeni kwethu okuqala kwedolobha lonke. Ukuhlehla kugxile ezihlokweni ezibanzi zokushintsha okusha kanye nobuholi. Simeme izipikha ekubuyeni kwethu okungamakhasimende angaphakathi nangaphandle enhlanganweni yethu. Ubungcweti bukaCheryl bungabonakala kuyo yonke into kufaka phakathi ukuhlelwa kwangaphambili kwalo mcimbi nangesikhathi sokuhlehla okuthatha usuku nohhafu. Ngesikhathi sokuhlehla, uCheryl wayenekhono lokuhlanganisa ndawonye nokusiza umholi ngamunye ukuthi aziqokele ikusasa labo kanye nebhizinisi labo. ”
W. Foeman Idolobha lama-Coral Gables
“Ngisebenze noCheryl amahlandla amaningi kanti umcimbi ngamunye uyayikhipha epaki. Ulalela okudingayo nokuthi uzama ukufeza ini ngomcimbi wakho, uletha umyalezo osebenzayo onezibonelo ezingalibaleki ezikhuthaza ababukeli. Ukuhlolwa kokwethulwa kukaCheryl kuhlala kungamamaki aphezulu kakhulu. Uqinisile, unamandla futhi unolwazi. Uyabeletha njalo! ”
Isikhulu Esiphezulu se-CREW Network Foundation
“Simeme uCheryl ukuthi ahlanganyele nathi njengesiprofetho esiyingqungquthela yethu yonyaka ye-2017 Canadian Association for University Continuing Education conference. Inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl ethi "Ukuhola In The Currents Of Change" ilungele iqembu lethu lothisha. UCheryl olungiselelwe ngokucwaninga ababekhona ngaphambi kwesikhathi futhi wabeka inkulumo yakhe ngokwezifiso ukubhekana nezidingo zethu ezingafani nomongo. Abeze engqungqutheleni babekuthokozela lokhu okwenzelwe bona. Inkulumo kaCheryl iphonsele inselelo yokucabanga kwethu ukuthi sidinga kanjani ukuthuthukisa amakhono okufunda izinto ezintsha njengabaholi bezinguquko nokuthi sidinga kanjani ukulungiselela abafundi abaqhubekayo bezemfundo ukuba balungele umsebenzi wekusasa. Amamodeli kaCheryl kumjikelezo wenguquko nasezigabeni ezine zokuthuthukisa ubuholi kwakungamathuluzi alusizo kakhulu esingawasusa futhi sisebenzise khona lapho. Siyayazisa indlela abambisene ngayo ekwenzeni inkomfa yethu ibe yimpumelelo enkulu. ”
UDean pro tem Impilo Yonke Simon Fraser University
"UCheryl Cran ubengusomlomo wokuvala we-2017 Worker Experience Tour yethu e-Atlanta naseChicago, futhi ubekhululeka! Amandla amakhulu ukuvala usuku nokushiya ababekhona baphefumulelwe ukuba bathathe isenzo. Ikusasa likaCheryl lokucwaninga komsebenzi liqokomise isidingo sokugxila kulwazi lwesisebenzi njengendlela yokwenza isipiliyoni esihle samakhasimende. Uhlinzeke zombili imibono nezixazululo kubaholi ukuthi babe nekusasa lomsebenzi belungele. Impendulo evela kwababekhona yayinhle kakhulu futhi bayithanda indlela uCheryl abenze ngayo bacanga ngempela! UCheryl wayengumdlali weqembu weqiniso. Imicimbi yethu yaba yimpumelelo enkulu, futhi siyayibonga ngengxenye yakhe kulokhu. ”
Umqondisi Wezokumaketha I-Appirio
“Sisanda kuba nochwepheshe weFuture of Work uCheryl Cran njengoSomlomo Osemqoka engqungqutheleni yethu yaminyaka yonke yeProject World / Business Analyst Conference, futhi ngegama nje ubemuhle kakhulu! Abebehambele lo mcimbi balinganise uCheryl njengesinye sezikhulumi ezihamba phambili futhi indikimba yakhe ethi “Ikusasa Lomsebenzi Manje - Izinguquko Ezinkulu Eziyi-5 Zekusasa” kube ngundabuzekwayo. Indlela yokubonisana kaCheryl negama lakhe eliyisihluthulelo yathokozelwa kakhulu - wafaka imininingwane ehlolwe kulabo ababekhona futhi embhalweni oyinhloko wanikeza izixazululo nemibono eyenziwe ngokwezifiso ezingasetshenziswa ngokushesha izilaleli. Inhlanganisela yamandla ashukumisayo, ubuholi bokucabanga, okuqukethwe kwangempela nokufanele kanye nesitayela esimnandi nesihehayo bekuyindlela efanelekile eqenjini lethu labaholi bephrojekthi abaqondayo nabahlaziyi bezebhizinisi. Silangazelele ithuba lokusebenzisana noCheryl futhi. ”
Umqondisi Womcimbi Weqembu I-ProjectWorld*I-BusinessAnalystWorld
"Ngibhalela i-Legal Innovation Zone neLexisNexis Canada, ngithanda ukubonga kakhulu ngesethulo sethu esiyingqophamlando kwiNgqungquthela yethu Yobuciko bomsombuluko ngoMsombuluko. Impendulo esiyitholile ngomcimbi nencazelo yakho ebalulekile, ikakhulukazi, bekungasho lutho. Isethulo sakho besiyindlela enhle yokuthi siphinde siphinde sifunde usuku, sicabanga ngezinto ezintsha ngomqondo obanzi. ”
Umphathi wephrojekthi Ithimba Lezingqungquthela Zomthetho
"Sibe noCheryl owayekhona," Ubuholi beNguquko - Ukudiliza amaSilos "engqungqutheleni kazwelonke ye-PRSM futhi washayisana neqembu lethu eliqondayo lababekhona. Emkhakheni wezentengiso, iningi lamalungu enhlangano yethu baphonswa inselelo yokuthi bangabambisana kanjani, basungule futhi bahole emazingeni aphezulu. Iseshini sikaCheryl sinikeze ucwaningo ngekusasa lomsebenzi, ukuqonda okuvusa inkomba ebuholini obudingekayo, kanye nemibono enokuqonda yokuthi ungavala kanjani ama-silos futhi wakhe isiko lokusebenzisana nelokudala. Isitayela sakhe samandla aphezulu nokusebenzisa ukuxhumana okumnandi, iziqeshana zama-movie nokuqonda kwevidiyo kwaba nomthelela. UCheryl uhlinzekele izingcingo ezenzweni kanye nezibonelo 'zokuthi' ungumholi wenguquko ongahola uguquko manje nakusasa ngekusasa lomsebenzi. Ngenxa yokuqukethwe ngokuqinile kukaCheryl nezilinganiso eziphakeme, sinqume ukumbuyisa ukuthi azokwethula kwiNgqungquthela Yonyaka Wonyaka. ”
Iphini Likamongameli Wentuthuko Yezokusebenza Inhlangano ye-PRSM
“Sibe nengqungquthela yethu yaminyaka yonke ye-Gartner Conference for Data Center, Ingqalasizinda, kanye nochwepheshe bezokuSebenza futhi sabuyisa uCheryl Cran, ikusasa lomsebenzi nesishintsha isazi sobuholi, esizokwethula njengengxenye yomkhondo wethu wobuholi. Iseshini kaCheryl Ubuholi @ ICore of Change ibibhukelwe ngaphambili futhi yagcwala futhi nakulo nyaka. Izithameli zethu eziqondayo zabaholi be-IT zifuna izixazululo ezibonakalayo, imibono kanye nogqozi njengoba zinikezwe umsebenzi wokunika amandla, ukuthonya kanye nokuguqula izindawo zabo zokusebenza ngekusasa lomsebenzi. UCheryl wethule khona kanye obekudingeka nokuningi - ucwaningo nezibalo zakhe, ezethulwe kwividiyo, futhi isitayela sakhe sokuxhumana esiqondile kwaba yinto ethandekayo eqenjini lethu. Silangazelele ukusebenza noCheryl futhi. ”
"UCheryl Cran, Ikusasa Lomsebenzi kanye Nobuholi Bokushintshwa kobuholi ubumnandi impela ngenkulumo yakhe eyisihluthulelo" Ikusasa Lomsebenzi - Wonke umuntu ungumholi Woshintsho "- sinamazwana anjengokuthi" UCheryl wayengumkhulumeli ophambili OBALULEKILE esake saba naye "kanye "Indlela kaCheryl yokusebenzisa ukuxhumana kanye nokuqukethwe okujabulisayo nokuphoqayo yayimangalisa". Abakwa-VIP bethu bathola ikhophi yencwadi kaCheryl ethi “The Art of Change Leadership - Driving Transformation in a Fast Paced World” futhi bejabule kakhulu ukukhuluma noCheryl ngemuva kwenkulumo yakhe enkulu ngenkathi esayina amakhophi abo. UCheryl nemenenja yehhovisi lakhe uMichelle iqembu elinamandla - okulula ukusebenzisana nalo ngaphambi, ngesikhathi nangemva komcimbi. Ngiyabonga Cheryl ngokusisiza ukuthi sinikeze inani eliphakeme kakhulu kwababekhona nathi be-AIIM 2017 ″
G. Clelland, Imicimbi ye-VP I-AIIM
“Sibe noCheryl asijoyina njengoSomlomo weKeynote engqungqutheleni yethu ye-GEA ePuerto Vallarta ngoJanuwari 2017. Umbhalo oqavile kaCheryl Ikusasa Lokulima MANJE! kube yimpumelelo enkulu nezithameli zethu zabadayisi abaqondayo namakhasimende embonini yezolimo. Isitayela sakhe esiqondile kepha esijwayelayo nokucwaninga kwakhe okuvusa umcabango kwakha isimangalo neqembu lethu. UCheryl uhlinzeke ngemininingwane ngekusasa lobuholi nokuthi ubuholi buvela kanjani ekuphenduleni kobuchwepheshe obandayo kanye noshintsho kubantu. Ubuye waphonsela inselelo iqembu ithuba lokuthi lisebenze amakhono abo obuholi ngokuthuthukisa 'izinhlelo zabo zokusebenza' okubandakanya ukuba nekhono lokuqamba, lokuqamba amakhono nokwanda lokuhola amaqembu ahlukahlukene. Amasu wakhe wokuqasha futhi agcine ngokuvula amehlo futhi besithanda ukuthi anikeze 'izingcingo ezizosebenza' ukuthi izilaleli zibuyele ezindaweni zazo zokusebenza. UCheryl wayehlasele kakhulu eqenjini lethu! ”
CEO I-GEA Farm Technologies USA
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu engqungqutheleni yeCentral 1 Credit Union futhi ubeyikhethelo eliphelele! Inkulumo yakhe eyisihluthulelo esuselwe encwadini yakhe entsha, Ubuciko Bokushintsha Ubuholi yilokho kanye iqembu lethu labaholi beCredit Union ebelikudinga. Abaholi abaningi baphawule ukuthi bafunde okusha, nokuthi bayayazisa indlela uCheryl ayithatha ekusaseni lomsebenzi nokushintsha ubuholi. Isitayela sakhe esiyisihluthulelo simnandi, siyasebenzisana, senza umuntu acabange futhi ngaphezu kwakho konke sinikeza imibono ebonakalayo abaholi abangayisebenzisa ngokushesha. UCheryl ubengumuntu ovelele engqungqutheleni yethu. ”
I-Central 1 Credit Union
“UCheryl Cran unconywe kakhulu ngelinye iqembu likaKaiser abesebenze nalo- futhi sisanda kumqasha njengoSomlomo wethu wokuvala umhlangano wethu waminyaka yonke - ukulingana okufanelekile! Umlayezo kaCheryl wawenziwe ngokwezifiso ngokuphelele ngokususelwa ebhizinisini lethu, izithameli zethu ezahlukahlukene futhi wayivala kahle ingqungquthela yethu. Ukwazile ukweluka kokuqukethwe kusuka kwezinye izinto zalolu hlelo waphinde wahlolisisa izinselelo eziyingqayizivele abantu abasemaqenjini ethu ababhekana nazo futhi wanikeza nemibono ekhuthazayo. Isizinda sebhizinisi nesipiliyoni sakhe kanye nokuqonda kwakhe okunembile nokulethwa okunamandla kunikeze iqembu lethu ugqozi futhi bekuyindlela enhle yokusonga ingqungquthela yethu! ”
Izinzuzo Zabasebenzi be-VP Federal Kaiser Permanente
“UCheryl Cran akayena uSheryl Crow kepha uyisihlabani somculo we-rock! Sibe noCheryl njengesikhulumi sethu sokuvala sochungechunge lwezinhlelo zamaqembu ethu obuholi. UCheryl usebenze nathi emicimbini engaphezu kweshumi lapho ehambise khona kubaholi ababalelwa ku-6000 emaqenjini aselungile esikhathi esizayo. Amandla akhe okungena emiyalezweni yabanye abethuli, ikhono lakhe lokubandakanya amaqembu ngamahlaya, ubumnandi, ubuqiniso kanye nomcabango ovusa inkanuko kwakumangalisa impela futhi Yikho kanye ebesikudinga sisondela emicimbini yethu. ”
"UCheryl Cran wayewusuku lwethu lwe-2nd Keynote ekuseni engqungqutheleni yethu yaminyaka yonke kaSeptember 2016 futhi ngegama elithi 'WOW!' UCheryl uletha amandla amangalisayo, ukuqonda, imibono esetshenziswayo nokunye okuningi kumazwibela akhe. Iqembu lethu belisithanda isitayela sakhe sokubandakanya nokubandakanya abantu kubandakanya ukufaka umyalezo wombhalo wezilaleli futhi sisebenzise imithombo yezokuxhumana ukumbuza imibuzo kulo lonke igama lakhe eliyisihluthulelo - i-hip kakhulu! Wayesihlekisa futhi wasinikeza ukuthi sizibhekele kahle ukubona ukuthi ngabe siguqula abaholi. Thanda ukulingana kokuxhumana kwezilaleli kanye namamodeli anamandla kakhulu anikela abantu 'ukuthi' bangabakheka kanjani futhi bangavumelana kanjani nezimo ngekusasa lomsebenzi. Wonke umuntu wayeshiya isikhathi sakhe ezizwa enamandla, enesibindi futhi elungele ukubhekana nekusasa manje! ”
J. Moore Inhlangano Yezempilo Yezempilo Yezempilo ye-BC
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sosuku engqungqutheleni yethu yabasebenzisi - futhi ngegama nje 'ubemuhle'. Inkulumo yakhe eyisihluthulelo ethi "Ukuhola Uguquko Emsebenzini Osebenza Ngokushesha Nokusebenza Kwezobuchwepheshe," yayifanele iqembu lethu labasebenzi bezempilo. Abantu babemthanda ukulethwa okusheshayo nokusheshayo kanye namamodeli akhe abonisa ukuthi 'ungaba kanjani umholi wezinguquko namakhono adingekayo. Ukugxila kwizixazululo zesikhathi sangempela sokudala bekubalulekile kuleli qembu futhi izinto zesenzo zinikeze wonke umuntu izinto eziwusizo kakhulu ukuthi zibuyele emsebenzini. UCheryl ulingisa lokho akhuluma ngakho - ngaphambi, ngesikhathi nangemva kombiko wosuku wayeguquguquka futhi esebenza kalula. Sincoma kakhulu uCheryl ngengqungquthela yenu! ”
UTricia Chiama, Umxhumanisi Sr. Wezinsizakalo Zokufunda InSight
"UCheryl Cran ubaluleke kakhulu eMhlanganweni Jikelele Wonyaka, ukuletha amandla nenjabulo njengesikhulumi sethu esibalulekile ekuqaleni kwengqungquthela yethu. UCheryl wabelane ngemininingwane yakhe nangekusasa lomsebenzi nokushintsha kobuholi, wenza ngokwethula isethulo sakhe kubhizinisi lethu nezethameli. Sisebenzisane naye kakhulu ekuqinisekiseni imiyalezo kulo lonke umhlangano iyaqondana, iyasebenza, futhi nenani eliphakeme eqenjini lethu. Usizile ukukhuthaza iqembu lethu, eshiya abantu benemibono abangayisebenzisa khona manjalo ezweni lanamuhla elishintsha ngokushesha nasemsebenzini. Sikujabulele kakhulu ukuba noCheryl njengophawu wethu osemqoka futhi simbonge ngamagalelo akhe ekushukumiseni inkampani yethu ukuba icabange futhi senze ngokuhlukile ukuze siphumelele esikhathini esizayo. ”
Pat Kramer, ISikhulu Esiphezulu I-BDO Canada
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu esiyisihluthulelo engqungqutheleni yethu yaminyaka yonke yeSilkRoad Conference futhi ngegama nje ubemuhle kakhulu! Izithameli zethu ze-tech savvy HR zamangazwa ngokuphelele isitayela sikaCheryl nokulethwa kokuqukethwe okubaluleke kakhulu, okufanelekile futhi okubalulekile maqondana nobuholi bezinguquko nekusasa lomsebenzi. UCheryl uphonsele inselelo sonke ukuthi 'sithuthukise i-OS yethu yobuholi' futhi sisebenzise ubuhlakani bethu ngesikhathi sangempela. Unikeze umongo izilaleli zethu ezidinga ukuqonda ukuthi zingahola futhi zilawule kanjani ushintsho olunomthelela. ”
J. Shackleton, ISikhulu Esiphezulu I-SilkRoad
"UCheryl ubengomunye wezikhulumi zethu ezibalulekile engqungqutheleni yethu yabaholi baminyaka yonke - Inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl ethi future of Work Is Now ibilifanele iqembu lethu. Umkhakha wezezimali ushintshile kakhulu futhi uphazamisekile - UCheryl uhlinzeke ngocwaningo namathuluzi kubaholi bethu ukukhulisa ubuciko nobuciko ngenkathi bezijabulisa. Umyalezo wakhe usisize ukusikhumbuza ngezinto okudingeka sizenze nsuku zonke njengabaholi ezokukhuthaza ukukhula nokwakha izinto ezintsha. Ividiyo enezibalo kanye nezibonelo zezifundo azinikeza izinkampani ezisekupheleni kwekusasa lamasu okusebenza asize ukunikeza umongo walokho esikwenzayo ngempela nokuthi yini esingaqhubeka ukuyithuthukisa. Iqembu lethu eliqondayo labaholi liphefumulelwe futhi uCheryl wove emilayezo ebalulekile evela kwizikhulumi ezedlule okwenze kwaba yizwi elihle lokuvala ingqungquthela yethu! ”
L. Skinner CEO Okokuqala West
"Sibe noCheryl njengesikhulumi sethu sosuku kanye nesethulo sakhe esithi" Izizwe Ezinamandla - Imfihlo Yokukhiqiza Nokusebenza Emsebenzini "zamukelwa kahle yizihambeli zethu. Ucwaningo lwangaphambi komcimbi lukaCheryl, esiluthumele egameni lakhe, lwamvumela ukuthi enze uhlelo lwakhe ngokwezifiso futhi ngokuya ngezimpendulo azitholile, wenza isethulo esigcwele amandla amakhulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Ucwaningo lukaCheryl ngekusasa lomsebenzi kanye namasu akhe okuthi angahola kanjani ushintsho ngokusebenzisa amandla kwakuhamba phambili. Ngiyabonga Cheryl! ” T. Tse Umphathi, Imicimbi AmaChartered Professional Accountants eBritish Columbia
“Inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl Cran ethi“ Ikusasa Lomsebenzi - Ingabe Ukulungele ”ihambisane kahle nesihloko seNgqungquthela ye-HRIA esithi 'Navigating Booms and Busts'. UCheryl uthathe isikhathi sokwazi ngokweqiniso izihambeli zethu ngaphambi kokwethula le nkulumo eyisihluthulelo yokuvala eyenziwe kahle kakhulu. Inhlolovo yangaphambi kwenkomfa kaCheryl nokufika kwakhe ekuseni kweseshini ezobuka okwethulwe ngosuku lokufaka okuqukethwe kwabo kumazwana akhe okuphetha bekuvelele. Ukusetshenziswa kocwaningo kukaCheryl, amathuluzi aqinile okusisiza ngesitayela sokusebenzisana esithi 'kanjani' futhi kwaba mnandi kubalaleli bethu abanokuqonda. Uhlanganyele iqembu ngemibuzo yombhalo futhi i-hashtag yethu ye-Twitter yayihamba phakathi nangemva kweseshini yakhe. UCheryl ukujabulisa kakhulu ukusebenza naye. ”
J Chapman, CMP Isikhungo Sezabasebenzi sase-Alberta
"UCheryl Cran uwugqibe epaki! UCheryl wayeyisihluthulelo sokuvula engqungqutheleni yethu yaminyaka yonke ngo-Ephreli 1st, 2016 futhi ubeseyisiqalo esihle kuze kube lusuku. Wayeheha, egqugquzela, futhi ehleka kakhulu! Umyalezo wakhe wawunesihloko futhi ubaluleke kakhulu emsebenzini wanamuhla wokushintsha. Ngingamncoma kakhulu ngengqungquthela yakho! ”
Usihlalo Wenkomfa CUMA
“Ngiyabonga futhi ngeseshini EMANGALISAYO izolo. Isixuku sami sinzima ukujabulisa, futhi ngokushesha ngithole impendulo enhle ngemuva kwenkulumo yakho. Ithimba ubulinike umdlandla, libhekisisa futhi labamba iqhaza kwengqungquthela yokugcina yezinsuku ezimbili. Akuwona umsebenzi olula. Ngingakuncoma noma kunini! Ngiyabonga futhi futhi ngiyethemba ukuthi izindlela zethu zingawela maduzane. ”
I-CBC & Radio-Canada Media Solutions
"UCheryl Cran ubekade eyisikhulumi sethu sokuqala semlozi engqungqutheleni yethu ye-NOHRC 2016 - inkulumo yakhe eyisihluthulelo eyi-lead nge-2020 Vision - Guqula ubuholi be-HR Professionals yayilungele iqembu lethu labachwepheshe be-HR! Umyalezo wakhe wokushintshwa kobuholi nokulungela ikusasa lomsebenzi manje yikho kanye sonke esasikudinga ukuzwa. UCheryl wenze izethameli zethu zabandakanyeka, zasebenzisana, zethula ngochuku futhi zithumela imiyalezo yazo eziyiphendula ngokuqondile nangokucabangayo. Sithole impendulo enhle kakhulu kubahambile bethu - sincome kakhulu uCheryl Cran ngengqungquthela noma umcimbi wakho! ”
Usihlalo we-NOHRC Conference 2016
"Sibe noCheryl Cran njengesikhulumi sethu sosuku emhlanganweni wethu wamakhasimende wakamuva nomyalezo wakhe othi" Leading Change In a Fast Paced & Technological Workplace "wawusebenza. Besifuna uchwepheshe we-tech savvy no-savvy ongathumela umyalezo kumakhasimende ethu ozobengeza inani labo embonini yezokunakekelwa kwezempilo futhi unikeze nemiyalezo ngokushintsha kwendawo yokusebenza. Isitayela sikaCheryl sokuzijabulisa ngenkathi ethula umyalezo obalulekile futhi odingeka kakhulu wendlela 'yobuholi okwabiwe' ngayo, ukusebenzisana nezizukulwane nobuchwepheshe bokuqhafaza kwamukelwa yilabo ababekhona ngesasasa elikhulu. Sicele imilayezo 'yokususa' engasetshenziswa futhi uCheryl wasinika lokho nokuningi - nakanjani sizosebenza noCheryl ”.
Usihlalo / Umhleli Ingqungquthela yesihlanu yonyaka yeCrowe Healthcare Summit 2015
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sosuku kwiHospitality Leadership Forum, okuyingxenye ye-International Hotel, Motel & Restaurant Show. Izithameli zethu zabaholi bezimboni zezihambi kanye nabafundi bamukele umyalezo kaCheryl 'wobuholi obabiwe' kanye nesidingo sokuthuthukisa uhlelo lwakhe lokusebenza kobuholi. Isethulo sikaCheryl sasibonga izinto eziningi futhi sithinta ukuxhumana kwezilaleli zakhe, amahlaya nobuchwepheshe. UCheryl ukhuthaze ababekhona ukuthi bathumele imiyalezo ne-tweet kuyo yonke indawo - kukhuphule izinga lokuzibandakanya. Impendulo etholwe yilabo ebesinabo ibiyinhle impela, futhi ubengeze kabi ohlelweni lwethu lwengqungquthela. ”
K. Moore, Umqondisi Isivumelwano Nemicimbi Inhlangano yase-American Hotel & Lodging
“UCheryl Cran wasiza umhlangano wethu waminyaka yonke we-Executive Strategy ngoFebhuwari 2014 futhi sijabule ngemiphumela. Ngosizo lukaCheryl sikwazile ukuphinda sigxile futhi sithole ukucaciseleka ngomlayezo wethu womkhiqizo kumakhasimende ethu, yini edinga ukwenzeka ngaphakathi ukufeza isethembiso somkhiqizo nalokho thina njengabaholi abakhulu okumele sikuguqule ukuze siholele inkampani ezingeni layo elilandelayo lempumelelo . UCheryl uchithe isikhathi nami kanye nethimba ngaphambi komhlangano wamasu ochungechungeni lwezingcingo zengqungquthela ukuqoqa okufakwayo nedatha yokusiza ekwenzeni umkhombandlela womhlangano wecebo. Wenze inhlolovo eku-inthanethi yokuqoqa imininingwane kanye nemibono yakhe ngezinselelo namathuba enkampani nokuthi ithimba eliphethe lalibheka kanjani ikusasa. ICheryl inekhono eliyingqayizivele lokuqoqa idatha enkulu nokuqukethwe, ihlunge kuyo bese inikeza indlela ecacile nelula esiza abaholi nebhizinisi ukuthi likhule. Isitayela sakhe siqonde ngqo kodwa simnandi futhi uqonda ngokujulile ngokukhula komuntu okudingeka kumuntu ngamunye ukuze akwazi ukufaka isandla emazingeni aphezulu emigomweni yonke yenkampani. UCheryl njengongoti kwezobuholi uyabonisana, ubuciko futhi imiphumela ibhekiwe sibheke phambili ekusebenzeni naye futhi. ”
URon Laudner, CEO Ezokuxhumana ze-Omnitel
“Ukwethulwa kukaCheryl Cran eqenjini lethu labaphethe, abaHoli abaKhulu nabanye bekungasho ukuthi, NGESIKHATHI! Sibe nengqungquthela yethu yezobuholi yeminyaka emibili futhi uCheryl wayengusomlomo wokuvala womcimbi wethu wezinsuku ezimbili. Amandla akhe okugcoka kokuqukethwe okukhona esimweni sebhizinisi futhi ekhona ngendlela emnandi, ehlakaniphile futhi evusa ingqondo iyamangaza. Sibe nomphumela omuhle kakhulu ovela esimisweni sikaCheryl saphawula ukuthi umyalezo wakhe uwusondele kakhulu kulowo mcimbi wezinsuku ezimbili nokuthi bazizwa bephefumulelwe futhi bezimisele ukuguqula indlela yabo emsebenzini wabo ngenxa yokumuzwa. "UCheryl ulethe ucwaningo, amandla okuxhuma, ubuhlakani bomhlaba kanye nokunye ukusiza ukwenza ingqungquthela yethu ibe yimpumelelo emangalisayo."
D. Dumont, i-HR Executive Jamieson Laboratories
"Inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl Cran ku-lead Change ene-2020 Vision yayikhona ngqo emalini! Amalungu ethu e-EO Arizona Chapter angosomabhizinisi abanamabhizinisi aphumelele kakhulu futhi bavuselelwa ngokuqukethwe nokuhambisana kwebhizinisi ngokwethulwa kukaCheryl. Unekhono elihlukile lokufisa ukwehluka kweqembu - saba nezimboni ezingaphezu kwezintathu ezilalelini - futhi uyakwazi ukunikeza ucwaningo olunzulu oluqinisekisa isidingo sabaholi bebhizinisi ukuhola ushintsho ukukhulisa ibhizinisi lisebenzisa ngempumelelo amakhono okuxhumana anendawo yomsebenzi owenziwa ngamacala amaningi. "Izisombululo zakhe zokushintsha zimbandakanya nobuchwepheshe obusebenzisa izindlela zokuxhumana, ukusebenzisa amasu ezokuxhumana, amasu okusebenza kabusha kwehlelo lobuholi nokunye. Umbiko ovela eqenjini lethu losomabhizinisi abebehambele ukuthi bacabanga ukuthi uCheryl's Keynote ubanikeze inani elifanele ekhaya kunanoma yini ababeye kuyo emicimbini yokufunda edlule. "Sizosebenzisana noCheryl futhi!"
Inhlangano Yabaphethe, Amasu Wokuthatha Umhlalaphansi e-Arizona
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu sokuvala engqungqutheleni yethu ye-GAM yabacwaningi mabhuku bangaphakathi - yeka ukubheda kwakhe! Isethulo sakhe ku-Leading Change sibonwe izinselelo namathuba abaholi bethu embonini yethu. Ucwaningo lwangaphambi komcimbi kaCheryl luqoqe ubuhlakani bezethameli obamsiza ukuthi enze ngokwezifiso isethulo sakhe ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, wadlulela phambili nangaphezulu ngokucwaninga izethulo ezaziphambi kwakhe ukufaka izinto ezifanele esethulweni sakhe. Wayemnandi, eqondisa futhi ehlinzeka ngamasu obuholi ashukumisayo futhi acindezelayo eqenjini lethu. Uthandile ukuthi unikeze "izinto zokwenza" ekugcineni ukuze abantu basuse imibono futhi bayisebenzise kuzilungiselelo zabo zokuzijwayeza. Ngincoma kakhulu uCheryl ngomcimbi noma ingqungquthela yenu. ”
Umqondisi, Ingqungquthela Isikhungo Sabahloli Bangaphakathi
“UCheryl Cran ubeyisikhulumi sethu sosuku ngosuku lwesibili lwengqungquthela yethu ye-UniverCITZy ye-BC Ministry of Technology, Innovation and Citizens 'Services futhi wenza umhlangano wokulandelela waphinde wakhuluma neQembu lethu eliPhethe esidlweni sasekuseni. Inkulumo eyisihluthulelo kaCheryl Ehola ngombono we-2 kanye neworkshop yakhe Umholi Wezinguquko zazingavamile! Ube nezethameli zethu zombili izithameli ezikude nezihlala bukhoma ezifuna okwengeziwe. Isitayela esihlukile sokulethwa kukaCheryl sifaka ukuxhumana ngokushesha nangokusondelana neqembu, ukuhlinzeka ngemiqondo enokuqonda futhi eshukumisa ingqondo, imibono esebenzayo kanye nezixazululo okufanele sizisebenzise. Umculo wakhe ubusenza ukuthi sidanse ezihlalweni zethu, ukuxhumana bekusenze sabandakanyeka futhi okuqukethwe bekusikhulisile ukucabanga kwethu. Sizosebenza futhi noCheryl futhi! ”
S.iblowow, umeluleki omkhulu, abantu nokusebenza kwenhlangano I-BC Ministry of Technology, i-Innovation kanye ne-Citizens 'Services